अनुसन्धान एजेन्सीको सनसनीखेज खुलासा: श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटना होइन षड्यन्त्र |
अनुसन्धान एजेन्सीको सनसनीखेज खुलासा: श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटना होइन षड्यन्त्र
२०७५, २ जेष्ठ बुधबार १४:११ May 16, 2018 ताजा खबरमनोरन्जन
भूषणले मृत्युको पछाडि धेरै कारण हुने बताए । उनले भने ‘पुलिसले जाँचमा यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ कि मृत्युबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ? श्रीदेवीको मृत्युपछि उनको सम्पत्तिको कानुनी दावेदार को हो ? उनको कसैसँग साझेदारीमा सम्पत्ति छ भने त्यो कसले पाउँछ ? मृत्युपछि बीमाको दावी कसले गर्छ ?’
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा फिल्म निर्माता सुनील सिंहको तर्फबाट यस विषयमा पुनः अनुसन्धानको माग गर्दै निवेदन दिइएकोमा यो निवेदन खारेज गरिएको छ । यो निवेदनमा सुनीलले ओमनमा श्रीदेवीको नाममा २४० करोडको बीमा भएको र यो बीमा रकम पाउन श्रीदेवीको दुबइमा मृत्यु हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको दावी गरेका थिए । डिसी नेपालबाट